Kobcinta faa'iidada leh Ololaha Iimayl-ku-guuleysiga ah | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/Kobcinta Faa'iidada Ololaha Iimayl-ku-guuleysiga
Kobcinta Faa'iidada Ololaha Iimayl-ku-guuleysiga
Taxane toos ah oo email ah oo fudud, saddex qaybood ah ayaa laga yaabaa inay ka caawiso ganacsiyada ecommerce inay dib u helaan macaamiisha oo ay kor u qaadaan faa'iidada.
Sababo badan dartood, macaamiisha daacadda ah ee ku soo noqnoqda dukaanka khadka tooska ah ayaa fure u ah guusha. Kuwan soo noqnoqda wax-soo-iibsada waxay ku kacayaan qiimo yar oo ay ku iibsadaan suuqa waxayna badanaa ku bixiyaan wax ka badan dalab kasta.
Mararka qaarkood, si kastaba ha ahaatee, kuwan xidhiidhada macaamiisha libdhi. Qofka wax iibsanaya waxaa laga yaabaa inuu sameeyay iibsiyo dhowr ah, laakiin ka dib, amarradiisu waxay noqdeen kuwo soo noqnoqda ilaa ugu dambeyntii, ma maqli kartid isaga. Qaar ka mid ah macaamiisha markii ugu horeysay waligood ma soo booqan karaan dukaankaaga intarneedka. Laakin meheraddaadu waxa ay dib u hawlgelin kartaa ugu yaraan dhawr ka mid ah oo ay ku soo ceshato automation marketing email.
Si aad u bilowdo, u aqoonso macaamiisha ololaha guul-celinta. Dabadeed billow taxane gaaban oo saddex qaybood ka kooban oo ka kooban (i) bixin, (ii) qiimayaal iyo astaamo, iyo, haddii loo baahdo, (iii) macsalaamayn. Nuxurka iimaylka - mawduuca mawduuca, nuqul jirka ah, wac ficil - qayb kasta way kala duwanaan doontaa iyadoo ku xidhan macmiilka dhacay. Qayb kastaa waxay ka koobnaan kartaa hal fariin email ah ama dhawr.
Markaa otomaatignimadayada saddexda qaybood ka kooban ayaa laga yaabaa inay lahaato, tusaale ahaan, laba iimaylo bixin ah, saddex iimaylo qiimo leh, iyo iimaylka nabad-gelyo ee lix dhambaal.
Qaybta koowaad ee automation-ka iimaylka-guul-celinta waa soo jeedin. Ganacsigaaga ecommerce waxa uu la xidhiidhaa macaamiisha dhacay heshiis gaar ah oo ka fiican waxa ay heli lahaayeen haddii kale.
Bixintaani waxay qaadan kartaa dhowr foom. Waxay noqon kartaa qiimo dhimis fudud. Waxaa laga yaabaa inaad ku darto soo-dejin gaar ah oo bilaash ah. Waxaa laga yaabaa in dalabku yahay hadiyad wax iibsiga. Ama waxaa laga yaabaa inaad haysato dammaanad gaar ah oo aad soo jeedin karto.
Soo bandhigidaada guul-guulaysiga waxa laga yaabaa inay ku bilaabato qiimo dhimis fudud. Halkan tusaale ahaan waa 25 boqolkiiba.
Uma baahnid inaad isku xidho hal dalab oo gaar ah. Tusaale ahaan, waxaad go'aansan kartaa in marxaladda bixintani ay ka kooban tahay saddex fariimo. Midka ugu horreeya wuxuu noqon karaa lacag la'aan, laba maalmood oo dhoofin ah. Fariinta labaad waxaa ku jiri kara qiimo dhimis boqolkiiba 25 ah, iyo, tan saddexaad waxay isku dari kartaa labadaba.
Shirkaddaadu waa inay samayso imtixaano kala duwan oo A/B ah si ay u barato soo jeedinta ama isku darka soo jeedinta ku guulaysata macaamiisha ugu badan iyo faa'iidada ugu badan.
Marka lagu daro bixinta lafteeda, sidoo kale tijaabi khadka mawduuca, nuqul jirka ah, walxaha garaafka, iyo xitaa marka fariimaha iimaylka la diro.
Tilmaamaha iyo Qiimaha
Haddii heshiis wanaagsan uusan kicin macaamiil dhacay, isku day inaad xasuusiso dukaanlaha sifooyinka iyo qiyamka shirkaddaada. Marxaladdan, waxaad iibinaysaa astaanta shirkaddaada.
U fiirso waxyaalaha ganacsigaaga ka sooca kuwa kula tartamaya.
Tusaale ahaan, haddii alaabtaadu ay yihiin kuwo deegaan ahaan u wanaagsan, sheeg xaqiiqadan. Haddii wax kasta oo aad iibiso ay yihiin kuwo shahaado leh oo vegan ah oo aan naxariis lahayn, ku dar. Haddii qayb ka mid ah faa'iidada dukaankaaga lagu deeqo hay'ad samafal, xasuusi dadka. Higaad soo jeedinta qiimaha ganacsigaaga si aan la hubin.
Marxaladda qiimaha, waxaad iibinaysaa astaanta shirkaddaada ecommerce. Xusuusi macaamiisha dhacay waxa ganacsigaaga ka dhigaya mid gaar ah.
Halkan mar kale, tijaabi iimayladaada. Mawduucdee ayaa leh sicirka furan ee ugu fiican? Nuqulkee ayaa soo saara gujisyada ugu badan?
Wajiga ugu dambeeya waa nabad gelyo. Fariintan, waxaa laga yaabaa inaad ku muujiso inaad ka xuntahay inaadan ka maqlin dukaanlaha in muddo ah oo aad u ogolaato inay ka baxdo liiska.
Mararka qaarkood waa in aad macsalaameyso. Talaabada ugu danbeysa ee ololaha dib u guuleysiga, ku dhig dhamaan khadka. Sii dukaameeyaha fursad ay ku doortaan.
Fariintani waa soo jiidasho shucuur ah oo ugu dambeyntii ku kicinaysa macaamilka ficilka. Sida waji kasta, tijaabi si aad u ogaato nuqulka ugu fiican, khadka mawduuca, iyo wac ficilka.
Haddii meheraddaada ecommerce ay rabto inay dib u soo ceshato macaamiil badan oo dhacay intii suurtogal ah, ka fiirso dhowr imayl oo socod ah. Mid kasta oo ka mid ah socodkan wuxuu diiradda saari karaa koox macmiil oo kala duwan.
Qaado 1 ama 2 boqolkiiba ugu sarreeya macaamiishaada. Kuwaani waa dukaameystayaal si joogto ah wax u iibsada, iibsada alaab xad-dhaaf ah, oo laga yaabo inay xitaa u gudbiyaan macaamiisha kale ganacsigaaga.
Tafaariiqle khadka ballaaran leh oo leh badeecooyin badan, dukaameystayaashan waxaa laga yaabaa inay iibsadaan toddobaad kasta. Bakhaar kale, 1 boqolkiiba ugu sarreeya ayaa laga yaabaa inay wax ka iibsadaan saddex ama afar jeer sannadkii. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad awood u yeelatid inaad aqoonsato macaamiishaada ugu fiican.
Nuxurka farriimaha soo jeedinta iyo qiimaha farriimaha waa inay ka duwanaadaan macaamiisha hal mar ku jiray boqolkiiba 1 ama 2 ugu sarreeya marka loo eego kuwa kale.
Tusaale ahaan, qiyaas macmiil sameeyay hal iib laakiin afartii bilood ee la soo dhaafay kamuu jawaabin wax loo soo jeediyay, ma samayn wax iibsi ah oo soo noqnoqda, oo xitaa ma furin email. Waxa aad wali rajaynaysaa in aad dib uga hawl galiso dukaameeyahan, laakiin waxa laga yaabaa in aanad siin qiimo dhimis la mid ah sidii aad siin jirtay macmiil hore oo sare.
Waxaan la kulmay istaraatiijiyadan dib-u-howlgelinta. Waxay noqon kartaa mid aad waxtar u leh. Waxay u shaqeysay meherad omnichannel ah oo leh kumanaan badeecooyin ah iyo soo-saare si toos ah u macmiisha leh oo leh dhawr badeeco.
Meheraddaada, u aqoonso oo kala mudnaan sii saddex ama afar kooxood oo macaamiisha ah kuwaas oo ay tahay inay helaan taxane guul-dambeed. Ka shaqee dariiqaaga koox kasta, tijaabi fariimaha weji kasta markaad tagto. Ugu dambayntii, waxaad yeelan doontaa qayb qaybsan, faa'iido-kordhinta, taxane toos ah.
Sidee ayay Xayeysiiska, Dhexdhexaadinta & Mawduuca Dheeraadka ah u saameeyaan Muuqashada SEO?
CrowdFund mashaariicdaada WordPress